Bhuku Rekutanga raSamueri 29:1-11
VaFiristiya vanonyumwira Dhavhidhi (1-11)
29 VaIsraeri pavakanga vakadzika musasa pedyo nechitubu muJezreeri,+ vaFiristiya+ vakaunganidza mauto avo ese kuAfeki. 2 Madzishe evaFiristiya akanga achipfuura aine mazana awo nezviuru zvawo zvemauto, uye Dhavhidhi nevarume vake vaifora vari shure kwavo vaina Akishi.+ 3 Asi machinda evaFiristiya akati: “VaHebheru ava vavingei?” Akishi akapindura machinda evaFiristiya achiti: “Uyu ndiDhavhidhi muranda waMambo Sauro weIsraeri wandava negore kana kupfuura ndiinaye.+ Handina kana chakaipa chandakawana paari kubvira pazuva raakatizira kwandiri kusvikira nhasi.” 4 Asi machinda evaFiristiya akamutsamwira, akati kwaari: “Ita kuti murume uyu adzokere.+ Ngaadzokere kunzvimbo yawakamupa. Usamurega achienda nesu kunorwa, kuti asazotipandukira patinenge tichirwa.+ Nekuti chii chimwe chaangaita kuti afarirwe nashe wake chinopfuura kumupa misoro yevarume vedu? 5 Uyu haasi iye here Dhavhidhi uya wavakaimba nezvake vachitamba, vachiti: ‘Sauro akauraya zviuru zvake,Uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake’?”+ 6 Saka Akishi+ akashevedza Dhavhidhi, akati kwaari: “Chokwadi naJehovha mupenyu, iwe wakarurama, uye ndinoda kuti uende neuto rangu kunorwa,+ nekuti handina kana chakaipa chandakawana pauri kubvira pazuva rawakauya kwandiri kusvikira nhasi.+ Asi mamwe madzishe haasi kuvimba newe.+ 7 Saka dzokera nerugare, uye usaita chero chinhu chinogumbura madzishe evaFiristiya.” 8 Zvisinei, Dhavhidhi akati kuna Akishi: “Nemhaka yei, ko ndaitei? Pane mhosva yamakawanira muranda wenyu here kubvira pazuva randakauya kwamuri kusvikira nhasi? Nei ndisingafaniri kuenda nemi kunorwisa vavengi vashe wangu mambo?” 9 Akishi akapindura Dhavhidhi achiti: “Kwandiri wanga wakangoita sengirozi yaMwari.+ Asi machinda evaFiristiya ati, ‘Usamubvumira kuenda nesu kunorwa.’ 10 Saka mukira mangwanani nevaranda vashe wako vawakauya navo; mukirai muende mangwanani pakunenge kwangova nechiedza.” 11 Saka Dhavhidhi nevarume vake vakamukira mangwanani kuti vadzokere kunyika yevaFiristiya, uye vaFiristiya vakakwidza kuJezreeri.+